Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » अर्थ समाचार
दुबईको अल फर्दानबाट सिटी एक्सप्रेसमार्फत पैसा पठाउदा २ लाख उपहार
काठमाडौं । सिटी एक्स्प्रेस मनी ट्रान्सफर र दुबई स्थित अल फर्दान एक्सचेन्जको संयुक्त सहकार्यमा आयोजना गरिएको ‘दशैं तिहार बम्पर धमाका’अन्तर्गत दिपक राम टमाटाले रु. २ लाख जित्न सफल भएका छन् । सो योजनाअन्तर्गत दुबईको अल फर्दान एक्सचेन्जबाट सिटी एक्सप्रेसमार्फत पैसा पठाउँदा दोस्रो बिजेता स्वरूप रु. २ लाख.....
काठमाडौं- कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राख्दै वाणिज्य बैंकहरुले तिहारको बिदामा आफ्ना शाखाहरु नखुल्ने भएका छन्। सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदाको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै काउन्टर बन्द हुने नेपाल बैंकर्स सङ्घले जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरुको छाता सङ्गठन नेपाल बैंकर्स सङ्घले सीमित शाखा खोलेर.....
एकैदिन ३ हजार ४ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं, कार्तिक २५ । मंगलबार सुनको मूल्य एकैदिन प्रतितोला ३ हजार ४ सयले घटेको छ। सोमबार सुन ९८ हजार २ सयमा कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको मूल्य १२ सय १५ रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यो अघिल्लो दिनको भन्दा तोलामा ७० रुपैयाँले कम हो।मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय.....
दसैँमा विदेशबाट घर आउँदै हुनुहुन्छ? यी सामानहरु ल्याउँदा एअरपोर्टमा भन्सार लाग्दैन
काठमाडौं । दसैँमा विदेशबाट घर फर्कँदै हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ भने ल्याउने विदेशबाट ल्याउँदा कतिपय सामानमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्दैन। केही सामानको भन्सार शुल्कमा सीमितता तोकिएको छ। सीमितता तोकिएका सामान बढी ल्याएमा जफत हुने तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९, उपदफा (३) ले २०७७ जेठ.....